Dagaal ka dhacay Deegaanka Ceelasha Biyaha
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xooggan oo xalay Al Shabaab iyo Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM ku dhexmaray deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in dagaalka uu yimid kadib markii xoogag katirsan Al-Shabaab ayaa weerar gaadmo ah kusoo qaadeen fariisin AMISOM ku leedahay meel wax yar ka baxsan Ceelasha Biyaha.
Labada dhinac ayaa dhex-maray iska hor-imaad mudo 30 daqiiqo ah socday, kaasi oo ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen in la iska-caabiyay dagaalyahanadii Al Shabaab ee weerarka soo qaadey.
Ciidamada dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qeyb-qaatey dahaalka, oo gurmad u sameeyay Askarta Burundi, ee lagu weeraray Saldhigga AMISOM.
Lama oga ilaa hadda khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Al Shabaab oo weerartay Fariisin ciidan oo ku dhaw Muqdisho
Soomaliya 16.11.2017. 16:41
Al Shabaab ayaa weerartay Fariisin ciidanka dowladda Soomaaliya ku leeyihiin meel ku dhaw Muqdisho...
Qarax ka dhacay duleedka Muqdisho iyo wararki ugu dambeeyay
Soomaliya 25.07.2018. 15:34
DF oo shaacisay magaca sarkaal Shabaab oo Muqdisho lagu dilay
Soomaliya 11.09.2018. 10:47